Booliiska Kenya oo xabsiga dhigay 29 Ugandha u dhashay oo argagixisnimo…. – SBC
Booliiska Kenya oo xabsiga dhigay 29 Ugandha u dhashay oo argagixisnimo….
Posted by editor on January 15, 2012 Comments
Ciidamada Booliiska Kenya ee la dagaalanka argagixisnimada ayaa sheegay inay su’aalo waydiinayaan 29 qof oo u dhashay Ugandha oo looga shakisan yahay inay doonayeen inay ku biiraan xarakada Al-Shabaab.
Afhayeenka ciidamada Booliiska Kenya Eric Kiraithe ayaa sheegay in 27 rag ah iyo 2 haween ah lagu qabqabtey magaalada Nairobi saacado ka hor, kuwaasi oo qorsheynayey inay u socdaal Soomaaliya si ay uga mid noqdaan xoogaga Shabaabka.
Warka ayaa sheegaya in qabqabashadan ay ka dambayso iyadoo si aad ah loo adkeeyey amaanka labada wadan.
Laakiin ilo wareed oo dhanka Booliiska laga helay ayaa sheegaya in ay dhici karto in dadkan la siidaayo maadama aanay jirin cadeymo rasmi ah oo lagu hayo oo ku aadan inay u safrayeen Soomaaliya ama ay lug ku leeyihiin wax loogu yeero argagixisada.
“Waxaynu doonaynaa inaynu ogaano ujeedadooda, iyo hadii ay jiraan qaar kale oo soo socda, laakiin ilaa iyo hada kuma hayno cadeyn dhab ah oo ku aadaninay yihiin argagixiso ama ay qalbiga ka jecelyihin” ayuu yiri sarkaal ka tirsan Booliiska Kenya.
Geesta kale Mr Kiraithe wuxuu ugu baaqay dadka Kenya inay ku sii jiraan feejignaanta ku aadan inay u nugul yihiin weeraro argagixiso , mana jirto ayuu yiri wax ilaa iyo hada iska badalay digniintii dhanka amaanka aheyd ee ay Booliisku soo saareen laba todobaad ka hor.
Kenya ayaa ciidamo u dirtey Soomaaliya si ay ula dagaalamaan xoogaga Shabaabka, waxaana taasi ay keentey in hanjabaadyo isdaba jooga ay ka soo gaaraan Shabaabka oo ku aadan inay weerari doonaan bartilmaameedyada muhiimka ah ee Kenya.
Ilhaan Cabdimaalik Nuur
SBC International Nairobi.